गन्थन-मन्थन | Aajako Shiksha गन्थन-मन्थन | Aajako Shiksha
वैकल्पिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको अग्रसरता
कोरोना भाइरसका कारण यस शैक्षिक शत्रको तीन महिनाभन्दा बढी कुनै पनि शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । बैशाख महिनाको दोस्रो सातासम्म नयाँ पुस्तक खरिद आदिमा बित्यो । त्यसपछि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा छटपटि शुरू भयो । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तक राखेर इ–लर्निङ्ग पोर्टल तयार गर्यो । अभिभावकको सहयोगमा घरमै स्वाध्ययनका लागि बालविकासदेखि क्रमशः कक्षा १० सम्मको लागि पुस्तक पनि तयार गर्यो । असार १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने र वैकल्पिक शिक्षण पद्धति अ ...
खगराज बरालको ‘सिकाइ र सहयोग’ पढ्दा...
पुस्तक चर्चालकडाउनको समयमा धेरै गाह्रो भयो दिन कटाउन । शुरुका दिनहरु यसो उसो गर्दे बिते । कहिले सिनेमा हेरियो, कहिले पुस्तक पढियो । फुर्सदको समयमा पेशासँग मिल्ने पुस्तकको खोजीमा थिएँ । ‘सिकाउने शैली’ पढेपछि नेपाल सरकारका सचिव खगराज बराल (श्रमिक बराल)को पुस्तकबाट म प्रभावित थिएँ । मलार्ई उहाँको अर्को एउटा पुस्तक ‘सिकाइ र सहयोग’ बजारमा आउँदैछ भन्ने थाहा थियो । त्यसैले, एक दिन डिल्लिबजारको बाटो हुँदै विद्यालय जाँदा आफूले पढ्न चाहेको त्यस पुस्तकबारे बुझ्न मन लागेर सांग्रिला प ...
एसइइ रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थीको चिठ्ठी
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार महोदय, हाल एसइइ दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीले सामना गरिरहेका समस्या दर्शाउन म तपाईँलाई ...
विद्यार्थीलाई घरमै सिक्ने वातावरण बनाऔं
सामान्यतया विपद् विशेष परिस्थिति र साँस्कृतिक चाडवाडबाहेकको अवस्थामा विद्यालयहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । सम्बन्धित निकाय तथा पक्षहरुले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्छ । भोलिको सुन्दर पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रनिर्माणका निम्ति राज्यले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन वा उनीहरुको नियमित सिकाइका लागि अभिभावकको भूमिका खोज्नु पर्छ । अभिभावकले पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अथवा उनीहरुको सिकाइ नियमित बनाइरहनका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । तथापि, सध ...
कैले खुल्ला स्कुल ?
कविता छन्द: इन्द्रबज्रा कैले खुल्ला स्कुल ? खै पाठशाला कहिले खुलेर जाऔं भनी उत्सुक हुन्छु हेर सुन्दैछु खुल्दैन अझै कडाई भो यो बसाई तर खै पढाई (१) पैला त मज्जा घरमा बसेर हेर्दै टिभी बित्दछ यो भनेर बाबा र आमासँग बस्न पाई हाँस्दै रमेथें नित दङ्ग हाई (२) भन्थे नि बाबा अब पढ्नु पर्छ भन्थिन् नि आमा घर बुझ्नु पर्छ सक्दो सघाएँ घर काम आमा हल्का पढाई पनि भो बिदामा (३) साथी र भाई सब दूर बस्छन् लाग्यो कहाली कव भेट हुन्छन्? एक्लो छु एक् ...
लकडाउनमा अभिभावकलाई सुझाब
कोरोना लकडाउनका कारण विश्वका करोडौं बालबालिकाको पठनपाठन ठप्प छ । शिक्षण संस्था लामो विदाका कारण विद्यार्थीहरु एक किसिमले बेरोजगार नै भएका छन् । समूहमा खेल्न/चल्न रुचाउने बालबालिकालाई घरको चौघेराभित्र चौबीसैं घण्टा सीमित गर्दा छटपटि र बेचैनी बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसबाट उनीहरुमा शारीरिक, मानसिक तनाव र अन्यौल हुनु अनौठो होइन । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास राम्रोसँग विकास भइनसकेका चञ्चले स्वभावका बालबालिकालाई घरभित्र नै थेगिराख्नुपर्ने कठिन बाध्यता अभिभावकमा आइलागेको छ । अहिलेको जोख ...
‘लक डाउन’को समय
रोचक अनि रमाइला किताब पढें, पढाएँ, दिक्क लाग्दा कोठैमा नाचें, गाएँ, रमाएँ । दराजभरि मैलो र धुलो धेरै भएछदशैंपछि बिर्सेर यतिका दिन गएछ । कुनाकानी पुछेर किताबहरू मिलाएँ,अस्ति खेल्दा उधे्रको लुगा पनि सिलाएँ । बाँझै थियो करेसाबारी खनें बेसरीमल छरेर फुटाएँ डल्ला पनि सुस्तरी । काँक्रा तीतेकरेला फर्सी अनि घिरौंलारोपेको छु रहरले कस्ता हुन्छन् हेरौंला । चित्र कोरें नेपालको सातै प्रदेश गनेरकविता नि लेखेको ‘हुन्छ कि त !’ भनेर ‘लक डाउन’ को समय बिताउँदै छु यसरीभन साथी मलाई, तिम्रा बित ...
विद्यालय सुधारका आधारभूत तत्व
कुनैपनि देशको शिक्षा प्रणाली निरन्तर परिवर्तनीय गतिशील प्रक्रिया हो । त्यसैगरी, विद्यालय सुधार पनि एउटा प्रक्रिया हो जसमा निश्चित प्रकारका परिवर्तनहरूको माध्यमबाट उच्च गुणस्तर र प्रभावकारिता वृद्धिमा ठोस प्रभाव देखा पर्दछ । वास्तवमा, विगत केही पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका सामुदायिक तथा संस्थागत दुबै प्रकारका विद्यालयहरूको नतिजामा क्रमशः गिरावट आउनुले विद्यालय सुधारको अपरिहार्यता देखाउँछ । त्यसो त, हालसम्मकै सबैभन्दा कम अर्थात् मात्रै १०.२३ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको र यसको पनि ८० प्रतिशत ...
शिक्षक साथीहरुलाई अपिल
आदरणीय शिक्षक साथीहरु ! सादर नमस्कार । जीवनको महत्वपूर्ण समय बालबालिकाको भविश्य सुधारमा समर्पण गरेका हामी शिक्षकहरु अन्य राष्ट्र सेवकभन्दा विशिष्ट र संवेदनशील पेशामा कार्यरत छौं । हाम्रो अथक मेहनतले एउटा बालकको भविश्य सुध्रिने मात्र नभई सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको हुन्छ । हामी शिक्षकहरु आफ्ना निजी स्वार्थलाई त्यागेर मैनवत्ति झैं आफू पग्लेर पनि अरुलाई ऊज्यालो दिइरहेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने हामी शिक्षकले धेरै मेहनत गरेका छौं र व्यवहारिक ज्ञान भएका असल नागरिक तया ...
राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस–२०७४
लघु कथा : अक्षर
म विद्यार्थी छँदा पटक–पटक अभ्यास गरेर अक्षर सुधारेँ । मेरा दाजू राम्रा अक्षर लेख्नुहुन्थ्यो । त्यहीँ प्रभावले पनि मलाई अक्षर सुधार्न उत्प्रेरणा मिलेको थियो । शिक्षक भएपछि मजस्तै सबैले शुद्ध र राम्रा अक्षर लेखून् भन्ने चाहन्थेँ । सोचेजस्तो हुन सकेन । केही विद्यार्थी बुझ्नेगरी लेख्थे तर अधिकांश भने आफूले लेखेको आफैँले बुझ्न नसक्नेगरी लेख्थे । म कमजोरी हटाउन प्रयत्न गरिरहन्थेँ । कापीको निरीक्षण पछि कैफियतमा ‘अक्षर सुधार, सबैले बुझ्नेगरी लेख्ने बानी बसाल’ जस्ता कुराहरू लेख् ...
कृष्ण चरित्रबाट मनन् गर्नुुपर्ने कुरा
उत्तरकुमार पराजुली श्रीकृष्ण उनको न्वारनको नाम हो भन्न मिल्दैन । किनकी, उनी रोहिणी नक्षत्रमा जन्मेका थिए । ओ, बा, बि, बु चार पाउको रोहिणी हुन्छ । कुनै लिखतमा रोहिणीको दोस्रो पाउ हो भनिएबाट बालकृष्ण उनको नाम हुन सक्छ । कालो रुपरङ्ग र अर्काको चित्त छिट्टै आकर्षण गर्न सक्ने विलक्षण प्रतिभा भएका हुनाले कृष्ण भनियो । पछि मानका लागि श्री थपेर श्रीकृष्ण भन्न थालियो । त्यसो त, उनका छरछिमेकले काले, कह्नैया, काना, चोर ...आदि नाम राखिदिएका थिए । कालो भएका हुनाले काले भने, जिस्किएर एउटो आँखो चिम्म गरी हिँड ...
–नन्दलाल आचार्य मेरा लागि जनसेवा मावि चौथो नयाँ विद्यालय हो । मैले २५ वर्ष शिक्षण जीवन बिताइसकेको छु । आजसम्म एउटै हलजस्तो कक्षाकोठामा २०० भन्दा बढ्ता विद्यार्थी राखेर पढाउनुपरेको भने थिएन । शिक्षणीय अनुभवले खारिएको मनस्थिति भएर के गर्नु ? घना विद्यार्थी सङ्ख्या सुन्दा नै नयाँ विद्यार्थी रत्याउनु फलामका च्यूरा चपाउनु झैँ साह्रोगाह्रो हुने ठानेको थिएँ । डराएको मनस्थितिमै कक्षा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीहरू आपसमा गनगन गर्नमै व्यस्त थिए । मेरो उपस्थितिले खलबल केही कम भएपनि रोकिन भने सकेको थिएन ...
झोला, जागिर र म
२०७४ बैशाख १७ गते
रमाकान्त शर्मानजिक जस्तो लागे पनि चारघण्टा त खराखर हिँड्नु पर्छ त्रिपुरकोटबाट दुनै पुग्न । कालागौडा नपुगेसम्म चिया, नास्ता खाने ठाउँ पनि छैन । बीच–बीचमा खच्चरहरुको हुल, घण्टीको टिन–टिनको संगीत । बाटो छेऊ तथा भेरीको किनारतर्फ काठका फलेकहरुले बारिएको, काठकै फलेकहरुले बारी कोठा निकालिएको चारकोठे घरमा चिया र नास्ता पसल । पसियो त्यसै चिया नास्ता पसलमा । हिँडाइले थाकेको हुनाले धेरै बोल्न पनि मन लागेको छैन । चिया–नास्ता बनाउने कोठा र हामी बसेको पाहुना बसेर चिया नास्ता खाने कोठाको फलेक ...
मनाङको एउटा गाउँः एक मात्र विद्यालय, एक मात्र विद्यार्थी
२०७३ चैत्र २३ गते
रमाकान्त शर्माटंकी मनाङ माथिल्लो मनाङक्षेत्र तथा नेस्याङ गाउँपालिकामा पर्छ । प्रटकीय दृष्टिले आकर्षक यो सुन्दर टंकी मनाङ, गाउँपालिका नबन्दासम्म एक गाउँ विकास समिति थियो । यहाँ रैथाने स्थानीय बासिन्दाका करिव ४० कुरिया थिए । ती घरहरु हालसम्म पनि रैथाने स्थानीयको स्वामित्वमै रहेका छन् । ती ४० परिवारमध्ये चार परिवार मात्र अहिले त्यसै गाउँमा बस्दै आएका छन् । ती परिवारमा करिव १२ जना मात्र सदस्यहरु रहेको स्थानीयको भनाइ छ । त्यसमध्ये एक परिवार प्रायः थोराङ पदयात्रा मार्गमा पर्ने याकखर्कमा होटलमा नै समय ...
सूक्तिसिन्धुका सय वर्ष
आऊ प्रिय!नगर बेर भनी मलाई राखेर काखबीच हात दुवै समाई ती लाल ओठ मुखनेर पुर्‍याउनुभो लौ भन्न सक्तिनँ म ता पछि कुन्नि के भो ? पछि जरुर केही भो! यो त्यही कविताको अंश हो, जुन कविताका कारणबाट आजभन्दा सय वर्षअघि नेपाली साहित्यको इतिहासमा एउटा ठूलो हाहाकार मच्चियो। त्यसबेला प्रथम विश्वयुद्धमा जान लागेका सिपाहीहरू र दरबारका युवतीमा यौन उत्तेजना बढाएर तिनलाई बिगारेको आरोपमा चन्द्र शमशेरले थुप्रै कविलाई दण्डित गरे। 'बालामुग्धोक्ति' शीर्षकको यो कविता त्यस बेला अति चर्चित र विवादास्पद रहेको शृंगारिक कवितासंग ...
काठमाडौं । निश्चित अवधिको अध्ययन मूल्यांकन गर्न लिइने परीक्षालाई सबै विद्यार्थीले महत्वका साथ लिने गरेको पाइन्छ । तर अधिकांश विद्यार्थी परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने र कसरी पढ्दा लामो समयसम्म स्मरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने अलमल्लमा पर्ने गरेका छन् । १.बिहान पढ्नेकक्षामा शिक्षकले पढाएको विषयलाई घरमा आएर राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बानी विद्यार्थीका लागि उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । यस्तो सामग्री कठिन छ भने बिहानै उठेर पढ्नुपर्छ । फ्रेस दिमागले पढ्दा सम्झन सजिलो हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । २. परीक्षाको ...
असल शिक्षक बन्न यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
१. कक्षाकोठा व्यवस्थापनकक्षाकोठामा छिर्नेबित्तिकै सोच्नुहोस् कि तपाईं विद्यार्थीको आँखामा सुपर हिरोको भूमिकामा हुनुहुन्छ । कक्षामा विद्यार्थीसँग असल र नम्र भएर वार्तालाप गर्नुहोस् । तपाईंको व्यवहार र हाउभाउको आधारमा विद्यार्थीले तपाईंलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका हुन्छन् । विद्यार्थीको उमेर समूहअनुसार फरकफरक व्यवहार गर्नुहोस् । २. उद्देश्य निर्धारण गर्नुहोस् तपाईं कक्षामा के उद्देश्य लिएर छिर्नुभएको छ, पहिले नै निर्धारण गर्नुहोस् । विद्यार्थीले के सिकून् भन्ने अपेक्षा तपाईंले राख् ...
नन्दलाल आचार्य वि. सं. २०३६ सालतिर नरे माइलो ६ वर्षमा हिँड्दै थियो । उसलाई घरमा पढाउने बाह्र वर्ष जेठा दाजु थिए । ऊ दाजूलाई माष्टर दाजु भन्थ्यो । आमाबुबाले उनलाई भनेका थिए– ‘भाइलाई सावा अक्षर र बाह्रखरी जान्ने बना । त्यसपछि तेरो कर्तव्य सकिन्छ ।’ माष्टर दाजुको नपिटी नसिकाउने बानी थियो । त्यसका लागि विभिन्न आइडिया लगाइरहन्थे । एकान्त भेट्नासाथ आमा भन्नुहुन्थ्यो– ‘अरू कुरा ऊ पछि आफैँ खोज्छ, अहिले फकाएर अक्षर चिना, शारीरिक दण्ड दिन सख्त मनाही छ । माया गरेर पढा । ...
विश्वमणि अधिकारी गणित पनि भाषा जस्तै दैनिक व्यवहारका लागि आधारभूत कुरा हो । हरेक नागरिकले दिनहुँ बजारमा किनमेल गर्दा गणितसम्बन्धी धारणा र सीप प्रयोग गर्नु पर्छ । गणित सिक्नाले विद्यार्थीहरुलाई जीवनको अति महत्वपूर्ण संख्यात्मक स्वरुप बुझ्न र व्याख्या गर्न मद्दत मिल्छ । विद्यार्थीले भविष्यमा जुनसुकै पेशा अपनाओस्, गणितसम्बन्धी धारणा, सीप एवं क्रियाको विशेषज्ञताले उसको कार्यकुशलता बढाउँछ । युक्तिपूर्वक गणित सिक्नाले उद्योगधन्दा, कृषि, विज्ञान र प्रविधि जस्ता अरु क्षेत्रमा पनि उच्चशिक्षा अध्ययनका लाग ...